व्हाइट सिटीको त्रिकोण, भिट्टोरियाको कालो उपन्यास | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, विधाहरू, किताबहरु, कालो उपन्यास
La सेतो शहर त्रिकोण स्पेनी उपन्यासकार ईवा गार्सिया सेन्ज दे उर्टुरी द्वारा निर्मित एउटा श्रृंखला हो। सबै तीन पुस्तकहरु भएको छ लेखकको गृहनगर (Vitoria, Álava) मा सेट। यद्यपि तिनीहरू अपराध उपन्यासको शैलीमा व्यावसायिकिकरण गरिएको भए पनि उनीहरूका षडयन्त्रहरूको विकास पनि जासूस उपन्याससँग मिल्छ।
गाथाका शीर्षकहरू सम्पादकीय ग्रहको छापमा जारी गरिएको थियो र आजसम्म बेचिएको एक मिलियन मुद्रित प्रतिलिपिहरू पार भइसकेको छ। यो कारणले, भिट्टेरियन लेखक आज स्पेनमा सबैभन्दा ठूलो प्रभावको साथ लेखक मानिन्छ। अचम्मको कुरा होइन, २०१ in मा त्रिकोणको पहिलो किस्त (सेतो शहर को मौनता) ठूलो पर्दामा ल्याइएको थियो।
1 लेखकको बारेमा, ईभा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी
3 व्हाइट सिटी को मौन (२०१ 2016)
4 पानीका संस्कार (२०१ 2017)
4.1 चरित्र विकास
5 समय लॉर्ड्स (२०१ ()
5.1 उनाईको भावनात्मक परिपक्वता
6 गाथा को मास्टरफुल समापन
लेखकको बारेमा, ईभा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी
उनको जन्म १ 1972 80२ मा एलावाको भिट्टोरियामा भएको थियो। उनी १ XNUMX s० को मध्यदेखि एलिसान्टेमा बसोबास गरे। प्रारम्भिक उमेरदेखि नै उनले पढ्नको लागि मोह देखाएकी थिइन, लेखकको आफ्नै शब्दमा - उनी आफ्नो बुबाबाट वंशानुगत थिए। उनीसँग अप्टिक्स र optometry मा डिग्री छ, क्षेत्र मा एक व्यापक क्यारियर संग। उनी एलिसेन्ट विश्वविद्यालयमा पनि काम गरिरहेकी छिन र प्रख्यात व्याख्याता पनि हो।
इवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी औपचारिक रूपमा अमेजनमा आत्म प्रकाशन संग आफ्नो साहित्यिक जीवन शुरू भयो पुरानोको गाथा सन् १ 2012 XNUMX मा। यो काम इन्टरनेटमा जनताले राम्रोसँग बुझेका थिए, जसको कारण एस्फेरा डे लिब्रोसद्वारा छापिएको प्रकाशन सुरु भयो। २०१ 2013 देखि उनले प्लानेटका साथ प्रकाशित गरे। अघि सेतो शहर त्रिकोण (२०१ - - २०१)), दुई उपन्यास प्रकाशित गरियो (दुबै २०१ 2016 बाट):
The Saga of the Long-live II: एड्सको पुत्र.
ताहितीको लागि यात्रा.
इवा गार्सिया सेन्ज।
को अगाडिको लाइनबाट व्हाइट सिटी को मौनता, लेखकले उनको जीवन्त कथा र लगातार आश्चर्यका माध्यमबाट पाठकलाई समात्न मद्दत गर्दछ। यस्तो तीव्रता दोस्रो पुस्तकमा अझ प्रस्ट देखिन्छ, पानी संस्कार। जे होस्, केहि आलोचनात्मक आवाजहरू - जस्तै पोर्टलबाट कार्मेन डेल रियो दुर्घटनाग्रस्त यात्री- तिनीहरूले औंल्याए कि "पुस्तकहरूको अन्तिम यती छिटो-गतिमा छैन।"
त्रिकोणको एउटा अनौठो पक्ष भनेको भिटोरिया शहरको सबैभन्दा प्रतीकात्मक साइटहरूको मनोरञ्जन हो, जहाँ घटनाहरूको राम्रो हिस्सा हुन्छ। वास्तवमा, यस कामको लागि धन्यवाद, लेखक Cadena सेर डे valava २०१ Award पुरस्कारको साथ (रेडियो श्रोताको विकल्प द्वारा) पहिचान गरियो।
भिट्टोरियाको ऐतिहासिक केन्द्रको वर्णन विशेष गरी राम्ररी विस्तृत र एकदम सही छ। उही तरिकामा, क्षेत्रको विशिष्ट चलनहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। साथसाथै पेलाफैमिलिया र उत्पत्ति समुदायको बिचमा मिल्दोजुल्दो —lava compound मा यौगिक surnames को विशेषताहरु को विशिष्टता (उदाहरणका लागि López de Ayala,)।
व्हाइट सिटी को मौनता (2016)
भिट्टोरिया शहर दम्पतीहरूको हत्याको श्रृंखलाबाट डराएको छ जसको उमेर of को गुणामा समाप्त हुन्छ। थप रूपमा, पीडितको शव शहरका प्रसिद्ध स्थानहरूमा देखा पर्दछ, स्थितिमा छोडियो जसले केही प्रकारको प्रतीकवादलाई जगाउँदछ। यो विचलित मोडस अपरेन्डीले Vitoria को आपराधिक अन्वेषण डिभिजनका निरीक्षक, उनाई López de Ayala, उर्फ ​​“Kraken” का पूरा ध्यान कब्जा गर्दछ।
पौराणिक सेफलोपड उपनामका साथ निरीक्षक प्रोफाईलिंग अपराधीहरूमा विशेषज्ञ हुन्। तर यो भ्रमपूर्ण अनुसन्धानमा उसलाई थप सहयोग चाहिन्छ किनभने हत्याराका रणनीतिहरूले पुरानो संस्कारको विशिष्ट ज्ञानको माग गर्दछ। यस कारणका लागि, क्राकेन एक विवादास्पद पुरातत्वविद् (पूर्वमा अन्य मृत्युको दोषी) लाई हेर्दछन् जसले गर्दा मृत्युको प्रस .्गलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ।
एक जासूस प्लॉटको साथ एक राम्रो रहस्य उपन्यास जस्तै, मुख्य चरित्रको एक प्रमुख र रहस्यमय चरित्र छ। इन्स्पेक्टर Unai López de Ayala दुई ​​निस्सन्देह मुद्दाहरूको कारणले आफ्नो उपनाम (क्राकेन) कमायो। सर्वप्रथम, व्यावहारिक व्यक्तित्वसँग मिल्दोजिम उसको प्रभावशाली शरीर, आफू वरपरका धेरैलाई समझ नबुझ्ने।
दोस्रो, एक जुनूनी ब्यबहार जसले उसलाई अत्यन्त जटिल अपराधहरू सुल्झाउनेतिर डोर्याउँछ, "किनभने कोही पनि उनीहरुको विशाल टेन्चल्सको पहुँचबाट टाढा छैन।" यसबाहेक, कुनै केस सुल्झाउन उसले नैतिक तवरले स्वीकार्य सीमाको सीमा तोक्न हिचकिचाउँदैन। यसको विपरित, सह-सितारा (प्रायः क्राकेनको अपरंपरागत व्यवहारले चिन्तित) धेरै तर्कसंगत व्यक्ति, सहायक आयुक्त अल्बा डाज डे साल्वातीरा हो।
पानी संस्कार (2017)
En पानी संस्कार, ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी नयाँ केसको रिजोलुसन प्रस्तुत गर्ने बेला मुख्य पात्रहरूको मनोविज्ञानमा जान्छ। कथा दुई टाइमलाइनहरू, १ 1992 2016 २ र २०१ into मा विभाजित गरिएको छ। १ 1992 2016 २ मा क्राकेन र उसको पहिलो प्रेमिका आना बेलन लियाओओबीचको सम्बन्धको सम्बन्ध छ। २ a०० वर्ष अघि अभ्यास गरिएको अनुष्ठान अनुसरण गर्ने क्रमश: हत्याराको पहिलो गर्भवती शिकार (२०१ 2500 मा) को हुने होला?
आना बेलन उल्टै झुण्डिएको अवस्थामा भेटियो, सान्तेन्डरको एउटा संग्रहालयबाट पहिले चोरी भएको भाँडामा डुबाइन। त्यसकारण वर्तमानमा भएका घटनाहरू बुझ्नका लागि १ 1992 XNUMX २ मा क्यान्टाब्रियन सहरको पुनर्निर्माण थाहा पाउनु आवश्यक छ। क्राकेन, उनका पूर्व, प्राध्यापक राल र रेबेका (प्राध्यापककी छोरी) यस काममा सहभागी भए। यो एक मिशन हुन सक्छ एक युवा हास्य पुस्तक कलाकार को foreboding उपस्थिति द्वारा चिह्नित।
En पानी संस्कार नायकको सबैभन्दा कमजोर पक्ष देखा पर्दछ। किनभने हत्यारा क्राकेनको विगतसँग जोडिएको छ र गर्भवती महिलाहरूको पछि लाग्दछ। उनको डर जायज छ किनभने उपायुक्त अल्बा उनीसँग गर्भवती हुन सक्छिन् (जसले सम्भवतः उनको लक्ष्य बनाउँदछ)। उनाईमा विगतको आघातले सबै डरलाई बढावा दिन्छ, जसले एक बच्चाको रूपमा आफ्नो बुबाआमाको मृत्यु भोग्नुभयो।
द्वितीयक पात्रहरूको योगदान (जस्तै उसको पार्टनर एस्टी वा क्राकेनका हजुरआज, उदाहरणको लागि) नतिजाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। तसर्थ, तर्कको विकासमा त्यहाँ अनावश्यक वा अनियमित परिच्छेदहरू छैनन्। यसको विपरित, प्रत्येक विवरण - यद्यपि यो नगण्य लाग्न सक्छ - सान्दर्भिक र लेखक द्वारा बनाईएको नाटकीय प्लॉट भित्र प्रासंगिक छ।
समय प्रभुहरु (2018)
को कथन जस्तै पानी संस्कारमा समय प्रभुहरु दुई समय रेखामा स्थान लिन्छ। पहिलो (वर्तमानमा), एक व्यापारीको हत्याको मामलाको समाधानको बारेमा उपन्यासमा प्रस्तुत हुने यस्तै परिस्थितिमा वर्णन गर्दछ। दोस्रो मध्य युगको ऐतिहासिक उपन्यासको एक प्रकार हो समय प्रभुहरु.
उनाईको भावनात्मक परिपक्वता
इवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरीले उनाईको भित्री यात्राको सबै पक्षहरू देखाउँदछ। ऊ गाथाको सुरूमा बरु डराउने चरित्र हुनबाट धेरै विचारशील र भावनात्मक रुपमा परिपक्व व्यक्ति हुन जान्छ। एक भारी र कुनै नराम्रो मान्छे को प्रभाव, उनी एक मानिसमा परिवर्तन हुन्छन् जसले परिवारलाई सबै भन्दा महत्वपूर्ण मान्छ। अन्त्यमा, नायकले वरपरका मानिसहरूलाई गहिरो मूल्य दिन सक्षम हुन्छ।
गाथा को मास्टरफुल समापन
समयरेखा बीच स्पष्ट दूरीको बावजुद, समय प्रभुहरु यो त्रयीको पूर्ण समापन हुन्छ। किनभने जडान अन्ततः सबै दावीहरूको बीचमा स्थापित भयो जुन त्यस पछि भएका छ व्हाइट सिटी को मौनता र उनाईको परिवार पृष्ठ अनुसार पाठकलाई पाठक (२०१)), लेखकले "सबै सिध्या एकसाथ बाँधिएको छ, यद्यपि कहिलेकाँही गाह्रो लाग्न सक्छ" छोड्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » सेतो शहर त्रिकोण
"निराशा" एक कविता जसले मकाब्रे र विडंबनाको प्रशंसा गर्दछ
जर्ज मोलिस्ट: «मसँग ठूलो उत्सुकता र सिक्ने इच्छा छ»